Xiddigaha Man United & Man City Oo Cadow Isku Ah Marka Garoonka Lagu Jiro Balse Saaxiibo Ku Ah Garoonka Banaankiisa - Laacib.net
Xiddigaha Man United & Man City Oo Cadow Isku Ah Marka Garoonka Lagu Jiro Balse Saaxiibo Ku Ah Garoonka Banaankiisa
Sir Alex Ferguson ayaa mar ku tilmaamay Manchester City deriska qeylada badan laakiin sida soo baxday qaar ka mid ah xiddigaha Manchester United iyo City ayaa ah saaxiibo isku fiican.
Gaar ahaan xiddigaha ka soo jeeda dalka Argentina ee u ciyaara labada kooxood kuwaasoo inta badan iska ilaawa xafiiltanka ka dhaxeeya islamarkaana isla baashaala sida ay qortay Manchester Evening News.
Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Nicolas Otamendi, Sergio Aguero, Sergio Romero iyo Marcos Rojo ayaa waqooyi galbeed England waxa ay keensadeen magaaladooda Buenos Aires.
Waxaa lagu sawiray iyagoo xaflad dhiganaya habeenkii sannadka cusub uu soo galayay iyagoo cuno meelo kuwada karsaday.
Wareysi ay siiyeen jariijada Argentina ee La Nacion, waxa ay dhamaantood ka hadleen xafladaha ay dhigtaan iyo doorka uu ciyaaryahan walba qaabilsan yahay.
Zabaleta, oo ka tagaya City dhamaadka xilli ciyaareedkan ayaa shaaca ka qaaday in howshiisa ay tahay inuu keeno hilib kala duwan iyo farmaajooyin laakiin laguma aamino inuu wax kariyo.
Shaqadaas waxaa iska leh Otamendi, kaasoo sharaxaad ku bixiyay: “Ma sheegi karo sirteyda cuno karinta, waxa ay dhamaan ka timaadaan kariyaha gacantiisa.”
Laakiin Zabaleta oo aan dooneynin in xiddiga ku kooxda ah uu noqdo mid ismahdiya ayaa ku jawaabay: “Ma dhihi kartid mar walba sababtoo ah wuu ismahdiyaa, laakiin waa kariye aad u fiican.”
Inay cuno meel kuwada karsadaan ayaa ah wax ay inta badan sameeyaan saaxiibadaan, laakiin kaliya Aguero iyo Otamendi ayaa martigeliya sababtoo ah iyaga kaliya ayaa leh meelo ku haboon in hilibka lagu dubo.
Caballero waxa ay isaga shaqadiisa tahay inuu keeno qoryahihii lagu shidi lahaa dabka wax lagu dubayo, laakiin cimilada roobabka badan ee Manchester ayaanan caawin.
Waxa uu sharaxaad ku bixiyay: “Haddii aan qoryo keeno, dhamaantood waa ay qoyayaan. Ma heysto doorasho aan ka aheyn inaan isticmaalo dhuxul, laakiin si fiican ayaan u sameeyaa.”
Romero ayaa isna sheegay in doorkiisa uusan muhim aheyn, wuxuu yiri: “Maxaan sameyaa? Waxba! Kaliya jawi wanaagsan ayaan la imaadaa. Aad ayaan uga soo fog nahay Argentina, aad ayaan uga soo fog nahay qoysaskeena iyo saaxiibadeena. In hilib meel lagu wada dubto wax ina dareensiinaya inaan gurigeena u dhow nahay.”
Xiddigaha City iyo United ee reer Argentina waxaa inta badan ku soo biira daafaca Everton Ramiro Funes Mori.